Ny refy 3 an'ny tetikady marketing imailaka mifandanja | Martech Zone
Talata, Janoary 26, 2016 Alarobia, Febroary 10, 2016 Douglas Karr
Mpivarotra maro no mifantoka amin'ny paikadiny amin'ny marketing mailaka amin'ny famokarana vokatra sy ny fahombiazan'ny mailaka fotsiny. Manadino ireo refy goavambe izay misy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny orinasanao amin'ny fifaninanana amin'ny boaty fampidirana izay manintona ny sain'ny mpamandrika.
Misy refy 3 amin'ny famakafakana rehetra atao aorian'ny fampielezana marketing amin'ny mailaka:
Fanafahana mailaka - izany no nahatonga ny mailaka nataonao tany amin'ny boaty. Izany dia fitambaran'ny fahadiovan'ny lisitry ny mailakao, ny lazan'ilay adiresy IP anao, ny fahamarinan'ny mpamatsy tolotra mailaka anao (ESP), ankoatry ny atiny apetrakao. Fehiny: firy amin'ireo mailaka nataonao no tonga tao anaty boaty, nisoroka ny fampirimana fako na nikatso. Betsaka ny olona tsy manahy momba izany, indrindra ireo izay tsy manana ESP tsara. Na izany aza, ny fandefasana dia mety hamoy ny fifandraisan'ny orinasanao sy ny vola miditra aminy. Mampiasa izahay 250ok ny araho ny toeran'ny boaty fampidirana anay.
Fitondra-tena ho an'ny mpanjifa - ireo no mpandray, na mpandray anjara, ny mailakao. Nisokatra ve izy ireo? Kitiho na tsindrio Click-Through (CTR)? Fiovam-pony? Ireo dia mazàna refesina amin'ny isa "miavaka". Izany hoe, ny fanisana dia ny isan'ny mpanjifa nanokatra, ni-tsindry na niova fo… tsy ho diso amin'ny totalin'ny fisokafana, tsindrio ary fanovana. Ny ampahany tsara amin'ny lisitrao dia mety tsy mandeha - inona no ataonao mba hifandraisana amin'izy ireo indray?
Fampisehoana atiny mailaka - izany no nataon'ny atiny. Inona ny totalin'ny fisokafana, ny tsindrio ary ny fanovana? Ahoana ny laharan'ny rohy? Mizara ny atiny ve ianao mba hifanaraka tsara kokoa amin'ny mpanjifa? Ny atiny novokarina tamin'ny dinamika, ny fizarana lisitra ary ny fanatontosana bebe kokoa dia manatsara ny tahan'ny fampisehoana mailaka.
Rehefa mandroso ianao, dia tokony hampitahanao ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitrao amin'ireo refy ireo isaky ny fampielezana sy lisitra na fizarana tsirairay. Hamela anao hipika haingana amin'ny toerana misy ny olanao!
Tags: paikady mailaka voalanjalanjapaikady voalanjalanjalafinymailaka Marketingpaikady marketing marketing